Ọrụ Nlekọta na Ọrụ Dubai na Dubailọ ọrụ dị elu na UAE
Dubai Ọrụ Opportunities
Tinye maka ọrụ na Dubai
Dubai Ọrụ Opportunities. N'ime 25,000,000 ọbịa maka otu ihe na United Arab Emirates a Ọrụ na Dubai. N'ihi nke a ụlọ ọrụ na Dubai na - achịkwa iji nweta ọtụtụ ndị na - achọ ọrụ ka ha nwere ike isi na ịntanetị. Ihe mbu ị ga-echetara maka ndị niile na - ewe ọrụ maka ọrụ na Dubai yana maka ndị na - achọ ọrụ na Dubai ndị na-agbalị ugbu a ịchọta ọrụ na Dubai. Citylọ ọrụ Dubai City etinyela ụfọdụ ozi banyere ndị ọrụ maka ọrụ na Dubai na 2018 na nke a n'uche na anyị ga-akwado gị ma duzie gị na nyocha ọrụ gị na UAE. Mana ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị ga-achọ ibido site na ntuzizi na nyocha nke akụ na ụba Dubai na-enye gị ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ na Dubai na Mumbai.
Ọnọdụ akụ na ụba nke United Arab Emirates
Ndị United Arab United Arab na ama n'ihu ha na-eso Saudi Arabia. Ruo ugbu a, aku na uba nke United Arab Emirates bụ akụ na ụba kasị ukwuu maka ọrụ na Saudi Arabia n'elu GCC ụwa. N'oge dị anya site na 1996 ruo 2018 UAE mụbaa nnukwu anụ ụlọ (GDP) nke USD 770 ijeri (AED 3.1 trillion) na 2016. N’aka nke ozo, ikwesiri leekwa anya na ụlọ ọrụ ndị na-ewe ego ọrụ. N'ihi na ụfọdụ n'ime ha na-etolite na UAE. Ọmụmaatụ, Ọrụ Careerjet-Dubai na Monster mbanye website. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Ọtụtụ mgbe n'agbanyeghị na aku na uba na United Arab Emirates na-atukwasiri obi na ego ha ga enweta mmanu. Dika amaraputara na Dubai na Abu Dhabi na-etolite aku na uba ya nke oma kemgbe 1995. Na mmechi site na mpaghara mmanụ, gas na mmanụ ala, United Arab Emirates na-etolite ịghọ ndị maara nke ọma na ụlọ ọrụ Arab Hotel. N’okpuru ị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ kachasị elu ịrụ ọrụ maka otu ụlọ ọrụ dị mkpa ebe ị nwere ike bulite Mweghachi na UAE (na Middle East)
Ọrụ Dubai - Ụlọ ọrụ kacha elu na-arụ ọrụ na Dubai
Ndepụta nke Ụlọọrụ kacha mma na Dubai
Dubai Ọrụ na Marriott Hotel
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu Marriott International Hotel ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ 5,700 n'ụwa nile. N'otu oge ahụ, ụlọ nkwari akụ ahụ amalitela mmemme mmemme a kpọrọ Na mmalite. Maka nzube nke ọhụrụ ndi isi oru ndi ozo choro. Iji mee ihe, ndị isi ọhụụ na-ezute ndị otu na-ahụ maka njikwa na elele ụlọ ọrụ ụbọchị ọ bụla ha na-ewebata gaa n'ọgbọ nkwari akụ Marriott, ụkpụrụ, akụkọ ihe mere eme na ebumnuche ahịa.
Na Marriot International Hotel, e nwere ezigbo ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọhụụ ndị si mba India nwere ike ịbanye na isi obodo nke UAE.
Dika ihe omuma banyere oru ndi ulo oru Mariott, ndi ohuru ha bukwa nyere nhọrọ iji rụọ ọrụ na Dubai City Marriott nkwari akụ. Ma ọ bụrụ na ha na-ele anya na-ejegharị gburugburu ụwa na-arụ ọrụ na Dubai. Ihe ọzọ dị mkpa bụ na ụlọ ọrụ na-enyere ndị ọrụ aka ịga n'ihu na ọrụ ha na nkwari akụ ahụ n'elu mba ụwa niile. N'okwu a, Marriott International Hotel bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kasị mma na-elekọta ndị ọrụ ha.
Dubai Ọrụ FedEx Express
Ihe mbụ ị ga-echeta Ụlọ ọrụ FedEx ana achi achi ọganihu na-aga n'ihu maka ndị inyom na-eburu ibu na UAE. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-amata echiche nke onye ọrụ ya. Iji rụpụta FedEx nke ọma, ha na-ewepụta ụzọ iche echiche maka ọrụ mmadụ-ọrụ. Ihe akaebe kacha emetụ n'ahụ bụ njikwa site na ntinye aka n’iru. N'ikpeazụ, usoro ụlọ ọrụ Fed Ex na-ahụta otu ọ bụla onye otu ga - eme ihe karịrị atụmanya ụlọ ọrụ. Na nyocha nke ikpeazụ, onye ọrụ ọ bụla na-ahụ na a na-egboro ndị ahịa mkpa ha n'ọkwa kachasị elu. Companylọ ọrụ ahụ na-elekwa anya maka njikwa ọhụụ na Dubai City Mpaghara.
The ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ewe maka ọrụ ya na 2018. Ndị na-achọ ọrụ nke ụwa na-ahụ ụlọ ọrụ a n'anya. N'ihi na ọ dị nnọọ mfe na-etinye na ha. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-enweta ọtụtụ ọrụ ọrụ n'ụbọchị. Ya mere, CV gị na akwụkwọ edemede gị ga-ele anya nke ọma. N'akụkụ aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ na-enyocha ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta ezigbo ohere ịnweta ọnọdụ GCC na FedEx Express.
Dubai Ọrụ Ngwa DAMAC
Ngwa DAMAC a tụlere ihe niile na ụlọ ọrụ a dị ịtụnanya na ha ụlọ ọrụ kachasị elu na Dubai. Dị ka egosiri n'elu, DAMAC bụ eziokwu kachasị mma na klas nke Middle East na GCC okomoko ezigbo ala ahịa kemgbe 2002. N'ikwu okwu n'ozuzu, DAMAC Properties na-ebute ụlọ obibi dị ịtụnanya ma dị mma na Dubai. Na Gulf ọrụ ohere maka India na ụlọ ọrụ a. N'ihi ya na-etowanye kwa ụbọchị na azụmahịa na oge ntụrụndụ ahịa n'ókèala Middle East.
Maka ọtụtụ ụlọ ahịa DAMAC gụnyere United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Egypt, Lebanọn, Turkey na ahịa nke United Alaeze. N'akuku ihu ala, DAMAC Properties bụ onye na-eduzi ezigbo ụlọ ahịa maka ọhụrụ Middle East Vacancies na Emirates ọrụ. Enweghị ajụjụ ọ bụla na ụlọ ọrụ a na-agba mbọ inye ụlọ ndị nrọ ọ bụghị naanị na Dubai na Abu Dhabi. Ma n'akụkụ na-ejikwa echiche ibi ndụ pụrụ iche na Qatar kemgbe 2015. Maka ndị ahịa na ndị na-eburu ndị ahịa si n'akụkụ niile nke ụwa n'ime UAE.
Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ama ama na mpaghara Gulf. Imirikiti ndị Pakistan na ndị India kwagara n'obodo ọzọ. Agbalị ịchọta ọrụ na DAMAC Njirimara. N’aka nke ozo, oburu n’acho icho oru na Dubai. Shouldkwesịrị ịtụle DAMAC n'ihi na n'ime ụlọ ọrụ a ọ bụ ọtụtụ ohere maka expats, yabụ malite na ndị ọkachamara na-achọ ọrụ!.
Dubai Ọrụ ACC - Arabian Ụlọ ọrụ na-ewu
ACC (ụlọ ọrụ ndị Arabian Construction) kere igosi Ike ụlọ Dubai. E guzobere Acc na Lebanon na 1967 mana n'ezie, ghọrọ onye na-ewu iwu guzosie ike na mpaghara GCC. A ghaghị icheta na ụlọ ọrụ mmemme ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ihe ka ọtụtụ n'ime ntinye ego nke Middle East na India. Na ụlọ ọrụ na-eme njem na nyocha maka ndị ọrụ na UAE. N'ezie, n'ime 51 afọ Arab Construction Company, nwere nnukwu itinye ego na UAE ma kpụzie mbara igwe nke isi obodo dịka Dubai, Abu Dhabi, Doha, na London. N'aka nke ọzọ, otu ụlọ ọrụ guzobere akụrụngwa ahụ maka nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọzọkwa, ACC wuru ụlọ ahụike mara mma dị na Qatar. Companylọ ọrụ kachasị mma maka ụlọ ọbịa ọbịa ọrụ na Dubai. N’agbanyeghi na ijikwa oru na ebe obibi $ 3,600,000 $ kwa ubochi. Mana na ụlọ ọrụ n'ezie, isi ihe na-elekwasị anya bụ ịnye ọrụ dị mma ebe a na-enwe ahụike kachasị elu na iwu nchekwa na azụmaahịa Arab maka ọdịnihu ọrụ na Dubai.
Acclọ ọrụ na-ewu ụlọ na Arabia Arabia dị ezigbo mma maka ndị ọrụ obodo. Gbalịsie ike na-enye ihe ọhụụ ọrụ na Dubai maka India. Anyị na-enyere aka ugbu a iji nweta ihe omuma banyere Dubai na Abu Dhabi. You nwere ike ịchọta ohere ọrụ dị nrọ n'ime UAE. Na nke a ụlọ ọrụ ịtụnanya.
Dubai Ọrụ - Al Hokair Group
Ọrụ na Al-Hokair Group dika okwu nke ndi otu Alhokair bụ aha amara nke ọma na Dubai City na blog Dubai ha. N'iburu n'uche ile ọbịa nke ndị Arab na ntụrụndụ Alhokair na-elekọta ụlọ oriri na ọ hotelsụ asụ yana ụlọ ahịa fashions ruo ọtụtụ iri afọ. Knownlọ ọrụ dị na Dubai bụ ihe amaara ama enyemaka na-enyere aka na ụlọ ọrụ Dubai. Ọzọkwa, Al Hokair Fashion Retails ma guzosie ike na UAE na-amalite ịzụlite azụmahịa ọ bụ 1990. Iji kwu eziokwu, arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-agbasa n'ọtụtụ ebe dị iche iche ọ bụghị nanị na UAE kamakwa, Alaeze nke Saudi Arabia, MENA, Central Asia, na mpaghara Europe. Nlele nke ụlọ ọrụ ha na-elekọta: Banana Republic, Bershka, Costa kọfị, Stradivarius, Topshop, Zara na ọtụtụ ọzọ na Dubai.
Al-Hokair Group - Ọrụ na Dubai
N'otu ejiji ahụ, porationlọ ọrụ ahụ aghọọla aha mbụ na United Arab Emirates na Saudi Arabia. Ikwu ihe banyere Qatar na o buru n’obi maka ọrụ na Middle East. Ebe ọ bụ na njem na-abịa Arab ụwa na-akpali na-eto eto na ọrụ aka. Otu ọ dịkwa mkpa nye omenaala ụlọ ọrụ ahụ hiwere ìgwè ahụ na 1975 ọzọ itinye ego na azụmahịa nke ntụrụndụ na ile ọbịa n'okpuru nlekọta nke Sheikh Abdulmohsin Alhokair. N'iburu nke a n'uche N'ime iri afọ 5, gara aga oru ndi otu a bawanye iji mesie ike maka ogige ntụrụndụ 79 dị na UAE. Isi okwu ọzọ na Al-hokair bụ na ha nwere ụlọ 34 na-agbasa na United Arab Emirates, Saudi Arabia, na Qatar. Ndi otu ho hokair nyere ndi ọrụ maka ndị na-esite na Freshers na agụmakwụkwọ MBA.
Dubai Ọrụ - Ụlọọrụ Ericsson
Na otu ahịa, Ericsson ụlọ ọrụ nwere usoro dị maka onye ọ bụla na-achọ ọrụ na Dubai. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha na-arụzi ndị injinia na ndị mmepe na Dubai. N'echebara aka nbanye na ekwentị mkpanaaka na ana achi achi ahia azumahia ya mere ụlọ ọrụ ahụ na - akpọkọta ndị nwere njikọ chiri anya na ekwentị ọdịbendị ya na ụdị ndị mmepe WhatsApp. Ọ dị mkpa ịghọta nke a na-enyere aka ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ iji nwee ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ngwa ngwa ha na-esiri ike.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ụlọ ọrụ a bụ ka na-arụ ọrụ n'ime ahịa ụwa. N'akụkụ dị mma, ụlọ ọrụ ahụ emepụtala usoro nkwalite maka onye ọrụ ọ bụla. Nke mere na o na - enyere ndị obere aka ị nweta usoro nkwalite ụlọ dị mfe. Ericsson bụ otu ụlọ ọrụ kachasị mma n'ime ụlọ ọrụ mmepe mgbawa.
Ụlọ ọrụ Ericsson na-agbazi ndị ọrụ ọhụrụ mgbe niile. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ịzụ ahịa na UAE. Nke a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma iji malite ọrụ na. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ị ​​kwesịrị ịmalite ịnyocha weebụsaịtị ha.
Dubai Ọrụ - Omnicom Media Group Mena
Isi ihe ọzọ maka ọrụ na Dubai nwere ike ịbụ Òtù Mgbasa Ozi Omnicom (OMG). Companylọ ọrụ ahụ chọrọ ka ndị ọrụ ya nwee ezigbo ndụ-ọrụ n'ime ụlọ. N'akụkụ dị mma, OMG na-eduzi ndi mmadu na enyocha ihe ha na eme. Ebee ka ndi n’enye ndi oru ha si ede ihe di nkpa na ndi n’echebara echiche banyere ihe obula banyere ha n’ebe oru ha. Omnicom Media Group gbadoro anya na nguzozi na ndu.
Ihe kachasị ama maka njikwa ha na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ pụta dị ka ndị isi ọrụ kachasị elu ebe onye ọrụ kwesịrị itinye aka Ụzọ ndụ Dubai, ahụike, na ịdị mma banye na ụlọ ọrụ Middle East dị ịtụnanya. Putzọ ọzọ, nzukọ a na-enweta ezigbo ndị ọrụ raara onwe ha nye na itinye onwe ha na ntinye, ọkachasị site n'aka ndị isi OMG, kwuru na GPTW Institute.
Ọzọkwa, jikọọ na Omnicom Media Group Management na LinkedIn
Dubai Ọrụ - DHL Global Logistic
Ọrụ DHL na Dubai, nke a na-elegharakarị anya ọrụ ụlọ ọrụ na-adọkpụ na Dubai bụ ibugo ngwa ọrụ na-eche maka nkwado. Na izugbe na DHL ị ga-ahụ ngwaọrụ ọ bụla ịchọrọ iji nwe ndị na-ewe ndị Dubai n'ọnọdụ maka ọdụ ụgbọ elu. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara gị otu esi amalite ọrụ ọhụrụ gị n'ime izu. Iji ichota ngwa gi na DHL. Mmadu niile nwere ohere iji udiri oru a ụlọ ọrụ na Dubai.
Na nchịkọta na ebe ọrụ Dubai a, ị nwere ohere kacha mma maka ịzụ ahịa Dubai na njem. N'akụkụ kachasị, DHL na-enye usoro dị mfe maka ndị na-achọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-enye gị ndụmọdụ gbasara otu esi ede akwụkwọ mmeri na ụlọ ọrụ webụsaịtị azịza ajụjụ a na-ajụkarị gbasara ebe ọrụ n'ime ụlọ ọrụ DHL. N'okwu a, ọ dị mfe inweta ọrụ na Dubai.
Dubai Ọrụ Pepsico Dubai
N'oge na-adịghị anya ị kwesịrị tinye CV maka nyochaa na Ọrụ PepsiCo ụlọ ọrụ. Mgbe oge ruru PepsiCo ga-akpọ gị. Ọ bụrụhaala na ị na-edebanye aha ha na ha A ga-agwa gị maka ohere ị ga - eme na United Arab Emirates. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịmaliteghachi egwuregwu na egwuregwu na mmasị nke ụlọ ọrụ ahụ. Na nyocha ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ ọ bụghị naanị na Dubai kamakwa gburugburu ụwa. Dịka ọmụmaatụ ndị na-achọ ọrụ site na South Africa. Ka ọ dịgodị, ndị ọrụ na PepsiCo na-agbasi mbọ ike inye ndị mmadụ ihe ụtọ Pepsi mbụ. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ Pepsico na onye isi nchịkwa na-azụlite agụụ mgbe niile na nri ndị ahịa chọrọ.
Dubai Ọrụ - AKWỤKWỌ Otu ngwá ahịa Dubai
Onye Gbanwee Ụwa na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị na Dubai. N'etiti etiti maka ahia ahia ahia, ndị ọ bụla na-achọ ọrụ kweere na inweta ọrụ na Dubai nwere ebumnuche dị elu karịa. Otu ụlọ ọrụ chọrọ ịgbanwe ụwa ma mee Middle East bụ ebe ka mma. Na ụlọ ọrụ ugbu a na-achọ ndị na-eji obi ha arụ ọrụ. Zipu Nmalite gị na leta ụlọ ọrụ Gọọmentị. Otu ụlọ ọrụ na-ekwupụta n'ụzọ doro anya ọnọdụ na obodo ị na-achọ.
N'ọnọdụ ndị ahụ, onye ọrụ ya na Otu ụlọ ọrụ ahụ nwere otu ọhụụ dị ka ndị ọzọ na-ekerịta ụkpụrụ nke ụwa. Hụ Middle East n'anya, Mee ihe ma kwere na onwe gị. N'ihi ya na ụlọ ọrụ a kwa ụbọchị ịkwesịrị ịgbaso ụkpụrụ ndị a. N'ụzọ dị ịtụnanya maka ị naghị anwa itinye akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị bụghị onye ahụ. Ezigbo ụlọ ọrụ maka ndị isi na-achọ ọrụ na MBA.
Ọrụ dị na Dubai - Onye kachasị mma na ọrụ na UAE
Maka ọtụtụ akụkụ, Otu ụlọ ọrụ ghọọ otu n'ime ọrụ kachasị mma na 7th kachasị mma na Asia ma tozuru oke NU1 mpaghara UAE Onye ọrụ maka ndị na-achụ nta n'ọrụ na Middle East. N'otu oge ahụ, Onye ahụ na-aghọ ọrụ 2nd kachasị mma kemgbe 2016 na WhatsApp Group. Iji malite ọrụ gị na ụlọ ọrụ kacha mma n'ahịa azụmaahịa. Can nwere ike nweta ezigbo mma ahịa ọrụ na Dubai. Companylọ ọrụ mberede na-akpọrọ gị ka ị bụrụ akụkụ nke ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na-atọ ụtọ ka ị nwee ike nyere ha aka ịgbanwe Arabic World.
Dubai Ọrụ - Jikọọ na Team Dell na Dubai
Soro Team Dell, Bido ọrụ na Dell niile na mberede otu ụlọ ọrụ kacha mma n'ụwa maka ndị ọrụ Pakistan. Ighzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ ụlọ ọrụ Dell na Dubai ị nwere ike ịchọta njedebe na-adịghị agwụ agwụ ọrụ ohere maka Pakistani na Dubai. kedu ebe inochu ahia na igba aka oru na UAE? Ọ dị mkpa ịghọta na Dell nwere ohere n'ofe ụwa niile na India, Europe, USA na Canada. Isi ihe ozo na ụlọ ọrụ a bụ otu ndi otu mba ofesi.
Otu ihe kpatara ya, ụlọ ọrụ ahụ mere ka ike gwụ site na nkwado na nkwado maka ire ahịa n'ime ụlọ. Buru nke a n'uche ụlọ ọrụ, omenaala lekwasịrị anya na ihe ohuru 2019 maka iwe ego na iji ya mee ihe ndị na-eme nchọpụta na Dubai. Maka ụjọ na ndị asọmpi ga-awakpo ha Dell mebere ebe nrụọrụ weebụ siri ike na Dubai. Ya mere, ndị raara onwe ha nye na-arụ ọrụ ha kachasị mma na ịre ahịa na ihe ịga nke ọma IT maka ndị ahịa ọ bụla na Dell UAE.
Dell Ọrụ Vacancies maka ndị na-achọ ọrụ mba ụwa na UAE
Iji mezuo nke ahụ, Inwere ike inweta ọrụ na Dubai dị ka ọrụ azụmaahịa, ọnọdụ ọkọnọ na Asia, injinia ọrụ UAE, na-akwụ ụgwọ ọnọdụ obodo, Ọzụzụ Iwu na ọrụ na Dell, Ọrụ nlekọta, arụmọrụ ọrụ, ihe onwunwe mmadụ na ị nwere ike ịghọ otu n'ime ndị nchịkọta Dell maka ọrụ na Dubai na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na Europe na Middle East.
N'ụzọ dị ịtụnanya ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike siri ike na teknụzụ. Anyị na-edekwa akwụkwọ na nke ahụ mu ho asɛm wɔ Middle East. Ihe izizi ị ga-echeta gbara ọsọ Dell maka na ha na-ewere ndị ọrụ kacha mma na Dubai. Na nkọwa zuru ezu, ọrụ ha bụ 100% maka ndi n’achu ndi oru n’uwa n’ UAE. Ụlọ ọrụ Dell na-emepụta ụkpụrụ siri ike maka ọrụ ahịa na Dubai, na ọrụ dịgasị iche na nke na-arụ ọrụ kachasị mma maka Dubai.
Ọrụ na Dubai - Òtù Ndị Ngwa
Dubai Jobs in Group Apparel nyere nke ahụ bụ ụlọ ọrụ nwere ume ka o buru onye isi Na mpaghara azụmahịa ngwa-ngwa na azụmaahịa na United Arab Emirates. Ndi otu maka oru ha bu ihe a malite ma wuo ya na nnukwu ọganihu nke ọrụ gị. N'iburu nke a n'uche, ihe ịga nke ọma nke groupdị groupdị Ngwa Ndị Ahịa bụ njikwa ha na ndị ọrụ. Companylọ ọrụ mgbe niile n'ime ume, ịnụ ọkụ n'obi n'ọfịs na ọkachamara n'ime ụdị ndị na-ere ahịa. Companylọ ọrụ ahụ na-ebuputa ụdị ọkwa dị elu dịka Calvin Klein, Cath Kidston, Dune London ebe ha na-aga n'ihu ahịa na ebe a na-ere ngwa ngwa ma na-atọ ụtọ na United Arab Emirates.
Ọrụ ndị uwe ojii na Dubai City na Abu Dhabi
Isi okwu ọzọ na Apparel Group bụ njikọ mba ụwa atumatu na UAE. Nzube ụlọ ọrụ bụ inye ndị interns na ndị gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ nwere nghọta zuru oke gbasara ọrụ ndị dị na UAE na ohere ọrụ dị na Middle East na ụlọ ahịa na-ere ahịa. Maka ebumnuche nke ịmalite ịrụ ọrụ ndị uwe na-agbanwe àgwà na ụlọ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ n'ezie na - enyere aka inweta ọrụ na ọrụ dị mkpa iji wee malite ọrụ ọhụrụ na Apparel Group. Ọ dịkwa mkpa na ndụ gị maka ọrụ na-ekwe nkwa na ịzụ ahịa ịkwesịrị ịmụtakwu gbasara ndị otu ahụ. Dị ka ihe bụ eziokwu, ụlọ ọrụ nwere ohere izizi na Dubai City na Abu Dhabi, iji nweta ọrụ na ndị otu biko gaa na Ngalaba nlekọta Google.
Dubai Ọrụ - Ọrụ na MasterCard
MasterCard otu ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị mma na United Arab Emirates ikwu ihe ọ bụla banyere azụmahịa ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu MasterCard bụ ụlọ ọrụ No.1 ma rụọ ọrụ na usoro ịkwụ ụgwọ ụwa kachasị ngwa ngwa. Na ịhazi nchekwa data 85,000,000 n'ime netwọkụ ụbọchị niile. N’aka nke ozo, MasterCard na-ejikọ ndị ahịa si Middle East, Europe, Canada, Asia, na US.
Companylọ ọrụ ahụ dị iche na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ n’ihi na ha na-arụ ọrụ ọsọ. N'otu ụlọ ọrụ ahụ na-emepe akaụntụ ndị ahịa, na-enyere gọọmentị ndị otu aka na gburugburu azụmahịa. N'ụzọ dị iche na ịkwụ ụgwọ, ụlọ ọrụ ahụ na-azụmaahịa na mba karịa mpaghara 250 na mpaghara dịka Qatar na UAE. N'ezie, ngwaahịa Master na ngwọta ya kacha mma n'ụwa. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara Ọrụ nchọta ọrụ Dubai na 2018.
Ọrụ na Splash - Top Companies to Ọrụ maka Dubai
N'ezie, 14 Mba ga-arụ ọrụ maka nke ahụ tinyere ndị kachasị mma maka ọrụ na Middle East, Africa, Europe na Canada na ọzọkwa Indian subcontinent. Dị mkpa iji mata maka otu ọ bụla Dubai Job na-achọ ụlọ ọrụ Jide n'aka na mmadu nile nwere ike inweta oru ma ghọọ onye otu ndi otu ya na Splash. N'ebe na-adịghị mma na-akụda onye ọrụ ọ bụla na ume na obi ụtọ ịrụ ọrụ na Dubai.
N'ime ụlọ ọrụ dị ogologo na Middle East na-acho ndi mmadu nwere oke ochicho ma di njikere iso n’uwa na Middle East. Na-ekwukarị na saịtị ọrụ a na ụlọ ọrụ UAE na-eme ka njikwa na-akpali akpali ma na-akpali akpali. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ị dị njikere maka ebumnuche ọhụụ ma chọọ inwe ntụrụndụ ma bido ịmalite ọrụ na ụlọ ọrụ dị elu iji rụọ ọrụ maka 2015 - 2016. Ighapu ime ka a ihe dị iche na gburugburu ebe obibi Middle East.
Ọrụ na PR Agency Weber Shandwick. Ọrụ niile na-arụ ọrụ na Weber Shandwick bụ ụzọ kachasị mma isi malite ọrụ na UAE. Ohere inweta si Dubai na abia ohuru. Ihe niile anyị tụlere na Weber Shandwick nwere ike iju gi anya ma oburu na i si India ma obu Pakistan. Site n'oge ruo n'oge na-akwado ntinye nke WhatsApp Group n'ọrụ na ekwentị, na-enweghị oge na ha na-elekọta mmadụ media mbanye, na-abụkarị, ụlọ ọrụ na-achọ ọdịnaya dere na Integrated media IT ndị mmadụ. Dika eziokwu, ulo oru na aru oru na ndị na-enyocha ọrụ na Dubai.
Ọrụ na Dubai maka akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ Estée Lauder
Ogologo oge ị na-etinye maka ọrụ na UAE na-anwa Estée Lauder ulo oru oru di na Dubai gi oru ohuru nwere ike ibido ebe a ya na ụlọ ọrụ a kwụgoro elu. Ruo ugbu a, ndị na-ahụ maka ịre ahịa Estée Lauder na-abụkarị ndị ọrụ ọkwa ha kachasị elu na ụlọ ahịa mkpọsa. Iji malite ebe ị nwere ike ịrụ ọrụ bụ naanị ebe ọ bụla na Dubai, Abu Dhabi, Doha na ọtụtụ ndị ọzọ. Kedu ihe kpatara eji họrọ gị ka ewee were gị n'ọrụ n'ime ụlọ ahịa na Estée Lauder ?. Nyere isi okwu ndị a, ịchọrọ ịhụ n'anya ma bụrụ nke a na-elekwasị anya na Dubai. Na isi, ọ bụrụ na ị bụ onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọhụrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nweela ọhụụ na azụmaahịa ma ọ bụ ahụmịhe ọrụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ ahụ bụ mmalite kachasị mma. maka nnukwu ọrụ gị na Dubai.
Lelee ọnọdụ ole na ole ụlọ ọrụ a:
Nhazi nlekọta ihe nhazi
Ọnọdụ Nchịkwa Akaụntụ
Ọkwá Ọchịchị Nkụzi Kasị Elu
Ọrụ na Dubai - Hilti Careers
Ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai na Hilti ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na Dubai. N'oge na-adịghị anya ị ga-eme ya dị njikere ịchọta ọrụ ọhụrụ. Should ga - ebido, na ọrụ ndị kachasị ọhụrụ na Hilti. Ka ọ dị ugbu a, na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike inyocha ọrụ ndị ọzọ kama ịchọ na-achọ ụfọdụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai. Na ebumnuche a icho ebe oru ma obu ahia nwere ọrụ nlekọta anya na UAE. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ọrụ ugbu a ịkwesịrị ịdee CV gị maka ọnọdụ akụ na ụma zuru okè n'ọdịnihu.
Na olile anya na ọrụ nrọ gị na-abịanụ biko nọgidesie ike na ntanetị kwa izu Hilti Ọrụ Ọrụ dịka ụlọ ọrụ na-emelite ọrụ oge niile Dubai na visa ma ọ bụ na-enweghị ohere visa. Dịka eziokwu, ị nwere ike smechie ezigbo ngwa ngwa ma na-echere maka ọrụ ọ ga-arụ n'ọdịnihu.
Maka nzube nke ọrụ na ụlọ ọrụ Emirates na ụlọ ọrụ Mars nke a bụ ihe ị na-achọ n’ihe gbasara ọrụ ọrụ. N'iburu nke a n'uche, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ebe n'ofe mba UAE na ụwa niile. Weebụsaịtị ọrụ Dubai a chọrọ ka gị na ndị ọzọ na-amaghị esi enweta ọrụ na Dubai. Ndị odeakwụkwọ Job na-ahụ ọrụ ahịa ha na ụlọ ọrụ Dubai. N'ihi tua egwu Jehova ngwa oru ga-ewe oge.
Ịkwesịrị ịbanye n'ekwentị email gị ma kwuo okwu ole na ole banyere onwe gị na ahụmịhe ọrụ. N'ihe nile, na ụlọ ọrụ ga-eme ka onye ọ bụla na-achụ dinta mara gbasara ndụmọdụ ndị na-abịanụ maka ọrụ 2019 maka ọrụ ndị dabara na ahụmahụ ndụ gị. Mars bụ ebe nrụọrụ weebụ mepụtara nke ọma na United Arab Emirates. Ọbụna karịa, ị nwere ike achọta ọrụ n'etiti ha site na isoro ndị na - eweghachi ọrụ HR.
Kedu ka esi aga Dubai maka Ọrụ?
Maka nzube nke nbanye na Dubai, Sonyere ndị otu anyị Whatsapp Group ma ọ bụ tinye nkọwa email gị n'okpuru. Site na ebumnuche a, ndị otu anyị ga-enwe ike ịhazi ọkwa maka ọrụ Ọrụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Ọrụ mmanụ na Gas na Dubai, Ọrụ UAE na UAE, Ahịa na ahịa ọrụ. Ka ewere chọta ndị na-amụrụ ọrụ maka ịkụzi ọrụ na Dubai, zigakwa ụlọ ọrụ gị na Dubai banyere nkọwa gị. Na ọrụ ọrụ na mmelite, can nwere ike ịnweta site na ịtinye email ma ọ bụ kwuo na ngalaba kọntaktị ha.
Ihe dị mkpa iji ghọta ọrụ ịchọta ọrụ Dubai anyị bụ na anyị nwere oke ndi choputara ndi choro oru na Dubai. Citylọ ọrụ Dubai City nwere ndị ahịa ụwa si United Arab Emirates na Qatar. N'echebara ihe kachasị mma echiche ụlọ ọrụ na Dubai, ndị ahịa anyị chọrọ iku ego ndị omempụ na-arụsi ọrụ ike na India.
Ọrụ na Dubai na Dubai City Company
Ihe mbụ ị ga-echeta ịgbanwe ọrụ gị ma nwee ike ịbanye ozugbo maka Dubai Ọrụ. Ọ bụrụ n’ị na - arụ ọrụ ọhụụ ugbu a site na ọkwa nke obere obodo gị. Gbalịa ịkwaga ọrụ ndị ọzọ na Dubai. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ enwetara ọrụ na ngalaba dịka ọrụ mmepụta ya na Abu Dhabi, HR Director ọrụ na Dubai, nchịkwa dị mfe ọrụ maka ọnọdụ ọkwọ ụgbọala maka mmalite, ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ dị na Dubai, ọnọdụ ọrụ ọpụpụ na mba ndị ọzọ, ọrụ na-arụ ọrụ na Abu Dhabi, ahịa na ahịa ọrụ dị elu na Dubai, ọrụ nchekwa na GCC.
Kpọtụrụ anyị ebe a maka gị nkọwa iji sonyere ịbanye Dubai ulo oru ohere oru na WhatsApp Otu anyi. Isi ihe ọzọ na ụlọ ọrụ anyị bụ nke ahụ A ga-atụkwasị gị na ndị na-ewe ndị ọrụ na Dubai. Yana profaịlụ gị ga - anọ na nchekwa data ndị Dubai. N'akụkụ dị mma, ị maghị mgbe ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahịa anyị ga-akpọtụrụ gị.